Petrus Romanus, 29 Sebtember 2021 | Manuel Silveira
← Petrus Romanus, 7 Oktoobar 2021
Luz de María, 19 de Octubre del 2021 →
IIDAADKA WADAADADA MICHAEL, GABRIEL iyo RAPHAEL
29 SEBTEMBER 2021
Maanta, naftayda aan jeclahay ee Ciise, Badbaadiyeheenna Jacaylka ah. Waa Iiddii Malaa’igta aan jeclahay: Saint Michael, Saint Gabriel iyo Saint Raphael.
Dunida waxaa iskutallaabta ku qodbay dhibaatada Covid-19 , taas oo keenaysa in aadanaha la xidho daciifnimada Dawladaha, taas oo u saamaxday aadanaha in laga xidho falcelinta aadanaha, taas oo ka dhigaysa in bani-aadamku hoggaamiyo aadanaha, oo aan raac Ciise, laakiin raac daciifnimada aadanuhu awoodi kari waayay inuu aqoonsado Runta.
Si aad u caawiso aadanaha, waxaan kugula talinayaa Daawooyinka, Ivermectin ama Hydroxychloroquine . Waxaan kugula talinayaa inaadan aqbalin Dawooyinka ay bixiyaan Masuuliyiintu.
Maanta, Ciidda Malaa’igta Weyn, waxaan kaa codsanayaa inaad si taxaddar leh u dhegeysato, maxaa yeelay ka geesku wuxuu samaynayaa dhaqdhaqaaqyadiisa si uu u burburiyo dadka Ilaah iyo Kaniisadda Kaatooligga iyo Kaniisadda Rasuullada.
Sidaad ogtihiin Xukunka Pope Benedict , oo loo yaqaan (Emeritus) – waqtigiisu aad buu u dhow yahay. Isha ku hay dhaqdhaqaaqyada Ruushka iyo Shiinaha , maxaa yeelay mar baadariga Benedict uu ka tago Rome waxaad ogaan doontaa in la gaaray waqtigii aniga, William John Baabtiisaha Costellia, aan la wareegi doono Vicar -ka ugu dambeeya ee Kaniisadda Masiixa, sidaan loo yaqaan Pope Peter II – oo sidoo kale loo yaqaan Little Abraham II .
Waxaan ka codsanayaa carruurtayda qaaliga ah inaysan dareemin lumitaan ama hoos u dhac, maxaa yeelay Ilaah iyo Maryan, oo ah Hooyada Ciise, ayaa na ilaalin doonta, markaa ha niyad jabin. Dunida waqtigan xaadirka ah waxaa gacanta ku haya ilaa heer Illuminati iyo Elite – iyo si ka sii badan, ka gees . Laakiin Ilaah wuxuu abaabulayaa Ciidanka Runta, oo ah 50-milyan oo xoog leh oo sii xoogaysanaya markuu waqtiga sii socdo.
Dadkayga qaaliga ahow, dhiiranow oo ku kalsoonow wanaagga Ilaah, maxaa yeelay aadanaha ayaa indho beelaya – laakiin Eebbe oo ku jira Awooddiisa iyo Wanaaggiisa ayaa ku ilaalinaya. Ilaah ayaa sara kiciyey Boqortooyada Faransiiska oo si tartiib tartiib ah ayuu u shaqeynayaa. Isagu waa nin wanaagsan oo quduus ah oo ila shaqeeya, markaa fadlan ha iloobin in Ilaah dunida oo dhan xukumo oo u oggolaanayo kan ka geesta ahi inuu fuliyo qorshayaashiisii ​​ahaa inuu dunida oo dhan la wareego, laakiin markan kan ka geesta ahi wuxuu leeyahay wakhti go’an. , markaa waxay u imaan doontaa si lama filaan ah. Waxaan filan karnaa in waqtiga uu ka bilaaban doono sanadka 2022 ilaa sanadka 2030 . Dabcan ma naqaano waqtiga saxda ah, laakiin tan ogow, in xukunka buuxa ee ka geesta ahi yahay lix toddobaad kadib Digniinta Weyn , oo aan filayno ka dib markii Pope Benedict (Emeritus) uu ka cararo Rome.
Boqorka iyo aniga qudhayduba waxaan diyaarineynaa Kaniisadda Haraadiga ah , markaa fadlan nagu xusuuso salaaddaada.
Ilaahay kuma illaawin, laakiin wuxuu ku weydiisanayaa duco badan. Fadlan u duceeya in layga sii daayo silsiladihii uu Shayddaan i saaray si aan u aado Filibiin si aan u dhiso Vatican oo aan u hoggaamiyo Kaniisadda. U soo duceeya inaan awoodi doono inaan u safro Singapore iyo Jarmalka iyo dalal kale oo badan ka hor intaanay suurtogal noqon. U soo ducee Boqortooyada oo u baahan taageerada Kaniisadda.
Dadkayga aan jeclahay, ha iloobin iimaanka, laakiin ku kalsoonow Ilaah iyo Hooyadeenna Quduuska ah, Maryan, maxaa yeelay Guushii Marwadayadu aad bay u dhowdahay, markii loo caleemo saari doono Mediatrix of All Graces, Co-Redemptrix iyo Advocate , maxaa yeelay dhammaan Mucjisooyinku waa aad u dhaqso badan. Xusuusnow anigana ii soo duceeya. Waxaan ka baryayaa Ciise inuu ku duceeyo: + sidaan kuugu duceyn doono: +
Ciise iyo Maryan ha idiin barakeeyo +